Ungayifaka kanjani i-NGINX nge-Google Page Speed ​​ku-Ubuntu ngokuzenzakalela | Kusuka kuLinux
Ungayifaka kanjani i-NGINX nge-Google Page Speed ​​ku-Ubuntu ngokuzenzakalela
Esikhathini esithile esidlule sakhuluma nawe mayelana NGINX iseva yomthombo ovulekile, eye yaba kancane kancane yabaholi embonini yayo, ngendlela efanayo, abaningi bayazi Ukushesha kwekhasi le-Google, imodyuli esivumela ukuthi sisheshise amakhasi wethu wewebhu. Kulesi siqondisi uzofunda uku faka i-NGINX nge-Google Page Speed ​​nge-othomathikhi ku-Ubuntu nakwizakhi.
1 Yini i-NGINX?
2 Siyini isivinini sekhasi leGoogle le-NGINX?
3 Ukufaka i-NGINX nge-Google Page Speed
4 Lapho usebenzisa i-NGINX nge-Google Page Speed
Kuyinto a Ukusebenza okuphezulu okulula okusetshenziswayo kwe-proxy / web server, mahhala ngokuphelele, i-multiplatform (i-GNU / Linux, i-BSD, i-Solaris, i-Mac OS X, njll.) kanye nomthombo ovulekile, nawo one-proxy yezinhlelo ze-imeyili (IMAP / POP3).
Ithuluzi lisatshalaliswa ngaphansi kwe- Ilayisense ye-BSD futhi inenguqulo yezentengiso. Ingenye esetshenziselwa kakhulu i- Ukubamba iwebhu, igqamisa phakathi kwabasebenzisi bayo i-WordPress, Netflix, Hulu, GitHub, Ohloh, SourceForge, TorrentReactor, hostinger phakathi kwabanye.
Ngokuya ngemininingwane esemthethweni: «NGINX Yiseva yewebhu yesibili esetshenziswa kakhulu ezizindeni ezisebenzayo (i-14,35%), idlula i-Microsoft Information Server. Ngaphezu kwalokho, lidlulise uphawu lokusetshenziswa ezindaweni ezingaphezu kwezigidi eziyi-100.
Siyini isivinini sekhasi leGoogle le-NGINX?
Kuyisigaba se- NGINX ithuthukiswe ngu -Google, evumela abaphathi bewebhu ukuthi basheshise amasayithi abo ngaphandle kokuthi babe ngongoti ekwenzeni ngcono ukusebenza kwewebhusayithi.
Ukufaka i-NGINX nge-Google Page Speed
Inqubo yokufaka i-NGINX ngeGoogle Page Speed ​​ibanzi kepha ilula:
Faka amakhosombe we-NGINX.
Landa amaphakheji we-NGINX ne-Google Page Speed.
Lungiselela i-NGINX ukuze isebenze ngejubane lekhasi le-Google.
Yakha futhi ufake i-NGINX.
Yenza izivivinyo bese ugijima.
Kuleli cala elithile sizokufundisa ukuthi: Ungayifaka kanjani i-NGINX nge-Google Page Speed ​​ku-Ubuntu ngokuzenzakalela, ukusebenzisa umbhalo osuvele umisiwe, ukwenza zonke izinyathelo ezichazwe ngenhla. Izinyathelo okufanele sizilandele yilezi ezilandelayo:
Hlanganisa indawo yokugcina iskripthi
git clone https://github.com/Alirezaies/ngx_pagespeed-auto.git
Qalisa iskripthi ngeSudo
Iskripthi sizonakekela ukulanda nokufaka konke ukuncika okudingekayo, ukufaka ijubane le-nginx ne-google, kanye nokwenza amalungiselelo adingekayo.
Ngale ndlela esheshayo nelula singasetha i-Web server yethu.
Lapho usebenzisa i-NGINX nge-Google Page Speed
I-NGINX isibe iseva yesibili ebaluleke kakhulu yewebhu, umsebenzi womphakathi ubelokhu umangalisa ngalezi zimpumelelo, ngokuba yisoftware yamahhala futhi evulekile, singasho ukuthi kubalulekile ukuthi siqale ukuyisebenzisa osukwini lwethu usuku nosuku.
I-NGINX iyindlela ephelele ye-APACHE, inemibhalo emihle kakhulu, ukufunda okulula nezindlela eziningi zokwandisa ukusebenza kwayo. Ukugcwalisa le seva enhle kakhulu ngobuchwepheshe be-Google, ngemojula yayo eyaziwayo ye-Google Page Speed, kuzosivumela ukuthi sibe namasayithi asheshayo, asabekayo, aphephile futhi avulekile.
Ngabe uyithola ilusizo? Sazise imibono yakho nokungabaza kwakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ungayifaka kanjani i-NGINX nge-Google Page Speed ​​ku-Ubuntu ngokuzenzakalela
Cacisa ukuthi kulabo abenze umsebenzi wabo wesikole le module enamakhasi ayihambisani kangako, uma usuvele unezimpahla ezisetshenzisiwe futhi uvula i-nginx ngokuthanda kwakho usukulungele ukuthola ithrafikhi enkulu.
oscar nami kusho
Kwakungacaci kahle kimi. Ngabe lokhu kusho ukuthi uma nginewebhusayithi, ngingayibamba nge-nginx mahhala?
Phendula u-Oscar Neme
Hhayi empeleni (yize ingasebenza), i-NGINX iseva yewebhu ekuvumela ukuthi uguqule noma iyiphi ikhompyutha ibe ithuluzi lokusingatha amawebhusayithi. Uma ufuna ukuthatha i-PC yakho ngoxhumano lwenethiwekhi, ukuze abanye bakwazi ukufinyelela kulwazi namakhasi owathuthukisayo, ungasebenzisa i-nginx (Lokhu kunemikhawulo yehadiwe, i-inthanethi, njll) ... Kepha isibonelo uma uqasha iseva ku-DataCenter ungafaka futhi i-NGINX ukusingathwa kwewebhusayithi yakho ... Ngamagama ambalwa i-NGINX yipulatifomu ekuvumela ukuthi ubambe iwebhusayithi yakho, kuseva oyifunayo (Ekhokhelwe, Emahhala, Eyakho noma yomuntu wesithathu)
Ngiyabonga ngempendulo, manje sengicacile
I-Web Hosting esheshayo futhi elula eyenziwe eChile.
Izinhlelo zokubamba iwebhu nge-Free SSL, ezilungele amakhasi womuntu siqu, ama-SME nezinkampani ezinkulu.
I-OpenStreetMap idinga usizo lwakho ukuze iqhubeke nokuzimela
Ama-Desktop eDebian ayi-6 - I-Computer Networking yama-SME